Indlela wafaka imoto ngenxa amaphoyisa omgwaqo (State Traffic Safety Inspectorate)?
Emva kokuthenga imoto umnikazi omusha ubophekile ezinsukwini ezingu-30 ukuba ukukubeka kucace ku omgwaqo. Phakathi nenqubo kulungiselelwa, uzothola amapuleti ilayisensi entsha, kanye isitifiketi sokubhalisa futhi uphawu imoto kucecevu idatha. Kumele kuqashelwe ukuthi le nqubo kuba nzima kakhulu, kodwa uma wazi kusengaphambili lokho umuntu imibhalo ukulungiselela futhi ngubani ukuba uxhumane, ungenza konke ngezinsuku amahora.
Indlela wafaka imoto ngenxa amaphoyisa womgwaqo? Silungiselela amaphepha adingekayo
Ukuze uqale nge uhlu wonke amaphepha adingekayo futhi imiqulu kuzodinga ukuthi traffic amaphoyisa nabasebenzi. Ukuze ubhalise udinga ukuhambisa:
Umazisi (m. E. A ipasipoti).
TC inkontileka sokuthengisa.
Imoto lokubhalisa dokhumenti.
amakhophi amaningana kwesitifiketi sokubhalisa nemoto yokuthengisa inkontileka.
Okufanele ukwenze traffic?
Ngaphezu kwalokho, ukuze siphendule umbuzo kanjani ukubeka imoto ngenxa amaphoyisa omgwaqo, udinga i-ukubhalisa, futhi ngesikhathi esimisiwe ukuza endaweni. Into yokuqala ekufikeni udinga ukuthola iwindi lapho ukukhiqizwa Kwenziwa aphoyintimenti izimoto. Kube kufanele athumele yonke uye walungisa iphakheji kwemibhalo. Ngaphezu passport, umshwalense kanye inkontileka futhi udinga ukufaka isicelo futhi kokuthola komsebenzi wombuso ikhokhwe (kungezona zonke izibonelo okufanele nemininingwane ingatholakala kwi-website esemthethweni amaphoyisa omgwaqo). Ngokulandelayo, umhloli uzohlola ngokunemba ukugcwaliswa yonke imibhalo bese uthumela imoto yakho endaweni ekhethekile edingekayo ukuze ihlolwe.
Kufanele kuqashelwe ukuthi uma uvuma lokhu inqubo ngendlela jikelele, kusadingeka ukuthi ivikele ujenga ukuze afake zonke amaphepha adingekayo. Ngakho ukuze ulondoloze isikhathi siqu, uze amaphoyisa omgwaqo kusengaphambili futhi ngaphambi kanjani ukubeka imoto ngenxa amaphoyisa womgwaqo, ukubeka imoto yakho eduze indawo ukuze ihlolwe. By the way, nayo kukhiqizwa khona ukulandelana ayo - izimoto, ngakho uma uza kamuva, kuyodingeka ukuthi ivikele emigqeni emibili - lapho kokuthumela iphakethe kwemibhalo neluhlolo siqondise imoto yakho.
Kodwa kwenzeka okuphambene. Ngemva umhloli ihlolwe isayithi enanini chassis, injini kanye Uhlaka ngedatha kadokotela ishidi idatha imoto, Iyobeka uphawu ukudlula le nqubo kwifomu. Ngemva kwalokho kudingeka ukuze ubuyele emuva ebhokisini efanayo futhi unike lolu iphepha isitatimende bese umaka ukudlula kuhlolwa imoto. Uma wenza konke ngendlela efanele, uyobe ngokushesha anikezwe inombolo entsha kanye nekhadi ukubhaliswa. Khona-ke ungaya emakhaya ngemoto yakhe entsha - manje kuphela ungumnikazi okugcwele obufanele.
Ngakho, sabuka ezicashile eziyisisekelo ukudlula inqubo kulungiselelwa umshini ku-akhawunti. Kulesi sigaba, umbuzo othi "kanjani ukuba agqoke irekhodi imoto amaphoyisa womgwaqo," kungaba kubhekwe ivaliwe. Nokho, kukhona okunye ukukhetha.
Ekugcineni ngikuxoxele kanjani ukubeka imoto kwi-akhawunti e-traffic ngaphandle kokuchitha isikhathi siqu. Manje kukhona izinkampani eziningi (njengoba umthetho, le nqubo wenziwa ezidayiswa), okuyinto ukusiza ekwakhiweni emisha yokubhalisa noma esetshenziswa imoto. Ingabe le sevisi abiza ecishe ibe yizinkulungwane 3.5-10. Isitatimende amaphoyisa omgwaqo kwi-akhawunti imoto ngaphandle labalamuli ulingana lenkulungwane 1. Ruble.
Ukwanelisa conditioner emoyeni kubalulekile, ukuhlola yayo - ebezidinga
"Toyota Kluger": ezibekiweko lobuchwepheshe we crossover Japanese
Ithuluzi semoto izimoto. umzimba ukulungisa
Okungaguquki noma ubukhulu Flat izinga
Ingabe i-actinia isilwane noma isitshalo? Incazelo kanye nezithombe ze-anemone
Indlela yokwenza waphansi izinga lokushintshisana? imithetho design, ifonti izibonelo yaphansi ngokuhamba
Kanjani ukwenza ukuhlaziya amagama Ukwakheka
Credit card ngesevisi mahhala futhi isikhathi somusa: imigomo abekelwe yona yokubhaliswa
Basic yesistimu yokusebenza imisebenzi
Ukwelapha Saskatoon-berry. izakhiwo ezisebenzisekayo Izimo
Fabio Grosso - footballer Italian
Marketing okunobuthi: Izinhlobo imikhankaso ukumaketha
"CrossFit": ukubuyekezwa, nokuqeqeshwa kokubili amadoda nabesifazane
Indlela mncane Victoria Romanets ka "Indlu-2": yokudla, imiphumela kanye neziphakamiso